Guddoonka Baarlamanka oo la dhameystiray & Waajibaadka ugu horeeya ee laga sugayo (Daawo Sawirro) | Gaaloos.com
Home » News » Guddoonka Baarlamanka oo la dhameystiray & Waajibaadka ugu horeeya ee laga sugayo (Daawo Sawirro)
Guddoonka Baarlamanka oo la dhameystiray & Waajibaadka ugu horeeya ee laga sugayo (Daawo Sawirro)
Doorashadii gudoonka sare ee Baarlamanka Somalia oo muddo labo cisho ka socotay magaalada Muqdisho ayaa la soo gebagebeeyey maanta, waxaana ku soo baxay masuuliyiin hore oo xilalkooda difaacday iyo kuwo cusub intaba.
Gudoomiyihii hore ee baarlamanka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa markii labaad xilkaas loo doortay isagoo Baarlamanka hogaamin doona afarta ee soo socota.
Jawaari ayaa shalay wareegii koowaad ka guuleystay musharaxiintii la tartamayey oo uu ugu cadcadaa xildhibaan C/rashiid Maxamed Xiddig.
Xilka Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka ayaa waxaa isna maanta loo doortay C/wali Shiikh Ibraahim Muudey oo wareegii labaad ka guuleystay xildhibaan Faarax Shiikh C/qaadir oo la tartamayey si weyna loogu saadaalinayey inuu ku soo bixi doono.
Waxaa sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad loo doortay Mahad Cabdalla Cawad oo xilkaas difaacanayey isagoo ka guuleystay musharaxii la tartamayey oo ahaa Xildhibaan C/qaadir Baqdaadi.
Guddoonka cusub ee baarlamanka Somalia ayaa marka uu hogaanka uu Baarlamanka la wareego waxaa sugaya howlo fara badan, waxaana ugu horeeya abaabulka iyo isku dubaridka doorashada Madaxweynihii afarta sano ee soo socota hogaamin lahaa dowlada.
Doorashada Madaxweynaha oo sanadkan noqon doonta mid aad u adag ayaa waxaa u taagan musharaxiin badan oo hamigoodu yahay iney xilkaas qabtaan, kuwaasoo olole xoogan wada, waxaana guddoonka baarlamanka laga sugayaa maalmaha soo socda iney magacaabaan guddiga doorashada Madaxweynaha oo waajibaadkoodu yahay iney cadeeyaan maalinta ay dhaceyso doorashada, qabtaan araajida musharaxiinta isla markaana abaabulaan doorasho hufan.
Title: Guddoonka Baarlamanka oo la dhameystiray & Waajibaadka ugu horeeya ee laga sugayo (Daawo Sawirro)
Posted by Unknown, Published at 12:37 AM and have 0 comments